Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Pituitary gland tumors ဦးနှောက်ထဲက အကျိတ်
Q: My wife had diagnosed by MRI scan. The endocrinologist said her Pituitary gland has tumor size 1.5 x1.3 cm. It is still under consultation for further treatment. Please explain about this disease treatment and side effect for living style. She is 46 years old with2kids.
Pituitary tumors ဦးနှောက်ထဲက (ပစ်ကျူထရီ ဂလင်း) အကျိတ် အများစုဟာ ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။ တချို့မှာ အကျိတ် ရှိနေပေမဲ့ ဘာမှလဲ မခံစားရလို့ ရှိနေမှန်းမသိကြပါ။ (ပစ်ကျူထရီ ဂလင်း) ဆိုတာ လူတိုင်းရဲ့ ဦးနှောက်အောက် နေရာလေးမှာ ရှိတယ်။ မြေပဲစေ့လောက်သာကြီးတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ မပြောနိုင်ပါ။
3. Prolactin နဲ့
4. Thyroid-stimulating hormone (TSH) ဟော်မုန်းတွေဖြစ်တယ်။
တကယ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့အကျိတ်ကြောင့် ဟော်မုန်း မထုတ်နိုင်တော့ရင် Hypopituitarism ရောဂါဖြစ်လာနိုင်တယ်။
Symptoms ခံစားရနိုင်တာတွေကတော့ -
1. Hyperthyroidism လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းများခြင်း၊
2. Cushing syndrome (ကွတ်ရှင်း ဆင်ဒရုမ်း)၊
3. Gigantism or acromegaly (အခရိုမက်ဂါလီ) လူေ့ာင်းကြီးမားလာခြင်းနဲ့
4. Nipple discharge နို့ကနေ မထွက်သင့်ဘဲ နို့ထွက်ခြင်း။
Pressure symptoms ဖိအားကြောင့်ဆက်ဖြစ်တာတွေလဲ ခံစားရနိုင်တယ်။
1. Headache ခေါင်းကိုက်၊
2. Lethargy အားယုတ်၊
3. Nasal drainage နှာရည်ယို၊
4. Nausea and vomiting ပျို့-အန်၊
5. Problems with the sense of smell အနံ့ပျက်၊
6. Visual changes အမြင်ပြောင်း၊ Double vision နှစ်ရုပ်မြင်၊ Drooping eyelids မျက်ခွံကျ၊ Visual field loss မြင်ကွင်းပျောက်။
Endocrine function tests ဟော်မုန်းစစ်ဆေးမှုလုပ်မယ်။
1. Cortisol levels (Dexamethasone suppression test + Urine cortisol test)
2. Follicle-stimulating hormone (FSH) levels
3. Insulin growth factor-1 (IGF-1) levels
4. Luteinizing hormone (LH) levels
5. Serum prolactin levels
6. Testosterone/estradiol levels
7. Thyroid hormone levels (Free T4 test + TSH test)
Tests that help confirm the diagnosis ရောဂါသေချာအောင် ဒါတွေလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
1. Formal visual field testing
2. MRI of head
1. Surgery ခွဲစိတ်ကုသမှု လိုနိုင်တယ်။
2. Radiation therapy ဓါတ်ကင်ပြီး သေးအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
3. Medications ဆေးပေးတာတွေလုပ်နိုင်တယ်။
a. Bromocriptine or cabergoline
b. Octreotide or pegvisomant
Possible Complications ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်သလဲ
1. Blindness မျက်စိကွယ်နိုင်တယ်။
2. Permanent hormone imbalances ရာသက်ပန်ဟော်မုန်းမျှခြေပျက်လို့ ဟော်မုန်းအစားထိုးပေးနေရနိုင်တယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 6:25 PM